Baarlamanka Soomaaliya oo ku kala feker duwan Kalsooni kala noqoshada Saacid – SBC
Baarlamanka Soomaaliya oo ku kala feker duwan Kalsooni kala noqoshada Saacid
Xildhibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa diiday Mowshinka Maanta la keenay Baarlamanka Soomaaliya oo lagu doonayay in kalsoonida loogala noqdo xukuumada uu wasiirka koobaad ka yahay Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Sey sye oo ka mid ah Xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegay in xiligan aanay habooneyn mowshin dhaliya kala qob qob kaas oo laga soo diyaariyo dowlada Soomaaliya.
Waxa uu ku nuux nuuxsaday Xildhibaanku in Xukuumadan Raiisul wasaare Saacid jirto mudo kooban oo aan sidaas u sii badneyn taasna ay tahay Mid aan lagu soo koobi karin wax qabadkeeda iyo qaababka ay u shaqeyso .
Xildhibaano kale oo iyaguna ka tirsan baarlamanka Soomaaliya islamarkaana ka mid ah Kuwa Mowshinka maanta keenay baarlamanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Xukuumada Raiisul wasaare Saacid aysan muujinin wax qabad buuran 6dii bilood ee ay jirtay.
Waxa uu tilmaamay Xildhibaankan in aysan muuqan rajo wax qabasho ah oo ay soo wado xukuumadan, ayna tahay mid karti la’aan ah oo aan haba yaraatee hirgelinin sharuucihii looga baahnaa in lagu qabto mudadii ay jirtay ee 6da bil aheyd.
Sikastaba ha ahaatee ku dhowad 95 xildhibaan oo ka mid ahaa 150 xildhibaan oo soo xaadiray Kulankii Baarlamanka Soomaaliya ee maanta qabsoomay ayaa soo hordhigay Barlamanka Mowshinkan ay ku doonayaan in kalsoonidii ay kala noqdaan xukuumada Dr Saacid.